न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ ७ आइतबार |
डा.शेखर कोइराला, नेता नेपाली कांग्रेस
म यसमा निराश भएको छैन । पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा जे जे भयो, त्यसलाई हेर्दा यो निराश हुने मत होइन । किनकि नेपाली कांग्रेसमा जसरी भागबन्डाको राजनीति, आईजीपी प्रकरण, महाअभियोग प्रकरण आदि कारणले जनमानसमा नेपाली कांग्रेसको राम्रो सन्देश गएको थिएन ।
भरतपुरमा उम्मेदवारी दिएर फिर्ता लिन लगाइयो, जुन ठाउँमा हाम्रो जित निश्चित थियो । यी सबै कारणको प्रत्यक्ष असर पोखरा महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सबै ठाउँमा परेको छ । महानगरपालिकाहरूमा उम्मेदवार छनोट जुन तरिकाले गर्नुपर्ने थियो त्यसअनुसार भएन ।
यसकारणले पनि कांग्रेसको सोचेजस्तो राम्रो परिणाम आएन । निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने बेलामा मेरो उम्मेदवारले टिकट पाउनुपर्छ हैन कि हाम्रो राम्रो उम्मेदवारले टिकट पाउनुपर्छ भनेर टिकट दिनुपर्ने थियो, त्यो भएन । यी सबका बाबजुद पनि ३४ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले जुन मत हासिल गरेको छ, त्यसप्रति म निराश भएको छैन ।
उहाँहरू (कांग्रेसका पदाधिकारी) के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन तर अहिलेको स्थानीय चुनावमा मैले अपेक्षा गरेको भन्दा राम्रो मत परिणाम कांग्रेसले हासिल गरेको छ । म खुसी छु । अलिअलि घात–अन्तर्घात भयो होला । तर एमाले, राप्रपालगायत अन्य दलहरूले चेप्दा पनि नेपाली कांग्रेसको यत्रो सिट आइराखेको छ र आउन बाँकी छ । म त नेपाली जनतालाई नमस्कार गर्छु, नमन गर्छु ।
अपेक्षा गरे अनुरूप काठमाडौं, पोखरा र भरतपुरमा परिणाम आएन भन्न खोजिएको होला । भरतपुर त नेपाली कांग्रेसले जितेको सिट हो नि, त्यहाँ हामीले मिस गर्‍यौं । पोखरामा गाह्रै थियो किनभने हामीले पोखरालाई ठूलो बनायौं १० ओटा गाविस जोडेर । यद्यपि अहिले अन्तिम परिणाम आउन बाँकी नै छ ।
काठमाडौं चाहिँ हामीले जानीजानी लुज गरेका हौं । कसैलाई म दोष त दिन्नँ । तैपनि पार्टीको कार्यसम्पादनमा जो जो बसेका थिए उहाँहरूले टिकट दिँदा हचुवाको भरमा हैन ग्राउन्ड रियालिटी के छ त्यो बुझेर दिनुपथ्र्यो । काठमाडौंमा त्यो नभएकै हो ।
स्थानीय चुनाव भनेको के हो भने, म विराटनगरमा जन्मेको मान्छे, विराटनगरमा कक्षा १२ सम्म पढेको मान्छे, १५ वर्ष विराटनगरमा डाक्टरी गरेको मान्छे, त्यसपछि धरान १५ वर्ष काम गरेको मान्छे अनि मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि विराटनगर नै हो ।
तर आज त्यही विराटनगर उपमहानगरमा मलाई टिकट दियो भने म हार्छु । किनकि म प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको जनतासँग ‘इन्भल्व’ छैन । जनताले त आफ्नै घरदैलोमै आउने उम्मेदवार खोज्छन् । त्यसैले यस्तै विभिन्न खालका प्राविधिक समस्याहरू देखा परे यसपटक ।
यसमा म कसैलाई पनि दोष दिन्नँ, हामी सबै दोषी हौं । चुनावी तालमेल मिलाउनु थियो भने पहिल्यै मिलाउनु पथ्र्यों, उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेपछि होइन । त्यो पनि स्थानीय तहमा नै स्थानीय नेतृत्वलाई अनुकूल हुने गरी तालमेल गर्न दिनुपथ्र्यो ।
किनकि यो स्थानीय चुनाव हो । नेपाली कांग्रेसका मानिसलाई हसियाँ हथौडामा भोट खसाल्न निकै गाह्रो हुन्छ । म त खसाल्न सक्दिनँ, अरूहरूले कसरी खसाले म जान्दिनँ । भरतपुरमा हामीले अक्षम्य भूल गरेका छौं, यो भूलको माफी पाउँदैनौं । काठमाडौंको कुरा अर्कै हो । कुनै जमानामा नानीमैयाँ दाहाललाई जिताएर किशुनजीलाई हराएको ठाउँ हो यो । काठमाडौंका जनता त्यस्तै हुन्, मलाई यसमा केही भन्नु छैन ।
लमजुङ, गैंडाकोटजस्ता केही ठाउँ हामीले गुमाएका छौ । ती ठाउँमा टिकट वितरण गर्दाको कमजोरीका कारण गुमेको हो । ती ठाउँमा टिकटका लागि क्षेत्रीय समितिबाट अर्कै मान्छेको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यो नाम लिस्ट काठमाडौं आएर परिवर्तन भयो ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका मान्छेले फलानालाई देऊ भन्छ, अनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर नेताहरूले आफ्नै तालले निर्णय गरेपछि गाह्रो त हुने नै भयो नि । गैंडाकोटको उम्मेदवार गजेन्द्र आलेमगर एकदम राम्रो मान्छे तर उहाँ त्यहाँका जनतासँग राम्रोसँग भिज्नु भएको थिएन ।
तलबाट अर्कै मान्छेको नाम आएको थियो । एक्लो नाम आउँदा पनि काटिएपछि परिणाम कसरी हाम्रो पक्षमा आउँछ त ? कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीले उम्मेदवार छनोट गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको क्षेत्रीय समिति र जिल्ला समितिलाई दिएको थियो, फेरि किन केन्द्रको हातमा आयो त ? महानगर, उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार छनोट गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई दिइएको थियो । तर अरूमा पनि विवाद र हस्तक्षेप भयो । एक्लो सिफारिस भएर आएकाहरूको नाम पनि फेरबदल गर्ने काम भयो ।
कांग्रेसलाई भौगोलिक संरचनाले असर गरेका छन् कि छैनन् ?
यो गाउँपालिका आयो भने म जित्छु र त्यसमा चाहिँ हार्छु भनेर राजनीतिक गर्ने होइन । संगठन बलियो बनाउँछु, जनताको काम गर्छु भनेर राजनीति गर्ने हो । कांग्रेसको सिद्धान्त, आदर्श जनतालाई बुझाउँछु अनि चुनाव जित्छु भन्ने हो । १ नं.को गाउँपालिका, २ नं.को गाउँपालिका र ३ नं.को गाउँपालिका जुन आए पनि नेपाली कांग्रेसको हो भनेर बनाउनु पर्‍यो ।
मेरो क्षेत्र १ नं. हो त्यहाँ मिलौं भनेर हुँदैन । त्यतो गलत सोचाइबाट हिँड्नु हुँदैन, त्यसलाई पार्टीको राजनीति मानिँदैन । त्यस्तै भौगोलिक संरचना परिवर्तन हुँदा पनि समस्या परेका छन् । पोखरामा पनि त्यही भएको छ । पोखराको धेरै पकड भएका गाविसहरू आएका छन् । हामी त्यस्ता ठाउँहरूमा किन चुक्यौं, पोखराका कांग्रेसीहरू किन चुके ?
अहिले पनि केही बितेको छैन । नेताहरूको सोचमा परिवर्तन हुनुपर्‍यो । स्थानीय तहबाट जे नाम आएको छ, त्यहस् नाम स्वीकार गर्नुपर्‍यो । तलबाट नै विवाद आएका छन् भने त्यसको समाधान पनि तलबाटै गर्ने । स्थानीय तहमा रहेका मानिसलाई सोध्ने अनि जनतासँग भिजेका मानिसलाई टिकट दिनुपर्छ ।
सानेपामा बसेर नेताहरूले निर्णय ठोकिदिने हैन । नेताहरूले यो स्थानीय तहको निर्वाचन हो भनेर बुझिदिए पुग्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि गाउँपालिकामा कांग्रेसले राम्रै परिणाम ल्याएको छ । किनभने तलबाटै डिसिजन भयो अनि जित्यो । जस्तो नगरपालिकामा मानौ तीनजनाको नाम आयो भने तीनजनामध्ये को बढी जनतासँग भिजेको छ, स्थानीय रूपमै, त्यसलाई बुझेर टिकट दिनुपर्छ । अहिले त त्यस्तो हुन सकेन ।
एकजनाको मात्रै नाम आउँदा पनि परिवर्तन गरेर पठाइयो । अनि उनीहरूले स्थानीय तहमा आफ्नो खुसीले मतदान गरे । जनतालाई के थाहा गठबन्धनका बारेमा । जहाँजहाँ केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ त्यही ठाउँहरूमा हामीले हारेका छौं । यसबाहेक नेपाली कांग्रेसले आईजीपी नियुक्ति, महाअभियोग, एलाइन्स आदि कुकृत्य गरेर ठूलो सैद्धान्तिक भुलहरू पनि गरेको छ, यसले पनि नकारात्मक असर गर्‍यो ।
बजेट जेठ १५ को मितिमै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । बजेटमा आचारसंहिता लाग्छ कि लाग्दैन । हामीहरू गलत नजिर बसाल्दै छौं । विश्वको कुनै पनि संविधानमा बजेटको डेट तोकिएको थाहा छैन । तर हामीकहाँ तोकिएको छ । त्यो किनभन्दा हामी आफंै अराजक भयौं । जेठ ३१ मा चुनाव छ जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भन्छन्, आचारसंहिता लाग्दैन ?
म त के भन्छु भने यस पटकको लागि सरकारले यो प्रावधानलाई निलम्बन गरोस् । हटाउने भन्न खोजेको हैन कि एक चोटीलाई निलम्बन गर्ने भनेको मात्रै हो । असार १५ मा बजेट ल्याउँदा हुन्छ । तर चुनावको अघिल्लो दिन बजेट ल्याएर गलत नजिर बसाल्नु हुँदैन । दुईवटा निर्वाचनको बीचमा सरकार परिवर्तन हुनु हुँदैन । स्थानीय चुनाव यही सरकारले गराओस् । दुई चरणको भए पनि चुनाव एउटै भएकोले यही सरकारले गराओस् । निर्वाचनको मुखमा सरकार परिवर्तन गर्नु राम्रो होइन ।
न्यूज अभियानका लागि देशान्तरबाट ।